Antso mahery vaika ho an'ny faharetana amin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny UNDP, Jamaica Style
Home » Lahatsoratra farany farany » News sustainability » Antso mahery vaika ho an'ny faharetana amin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny UNDP, Jamaica Style
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • tompon'andraikitra • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Ny minisitry ny Fizahantany Jamaika androany dia nanao ny lahateny fanokafana tao amin'ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana (PNUD).
Ny mpikambana dia i Argentina, Belize, Bolivia, Brezila, Chile, Kolombia, Costa Rica, Kiobà, Repoblika Dominikanina, Ekoatera, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Nicaragua, Panama, Paragoay, Pero, Suriname, Trinidad ary Tobago, Uruguay, Venezoelà.
Teny fanokafana nataon'i Hon Edmund Bartlett, Minisitry ny Fizahantany, ho an'ny Seminera Fondation UNDP/EU-LAC momba ny faharesen-dahatra ara-bola sy ny faharetana ho an'ny mpandraharaha ara-pizahantany.
Tena ilaina ny fananganana faharetana amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fampandrosoana ny Agenda 2030 ho an'ny fampandrosoana maharitra.
Izy io koa dia mitantana amim-pahombiazana ny fanoloran-tenantsika iraisam-pirenena ho an'ny fitomboana sy fampandrosoana maharitra sy maharitra amin'ny andry rehetra - ara-toekarena, sosialy ary tontolo iainana.
Ny minisitry ny fizahantany Jamaika Edmund Bartlett dia nilaza hoe:
Voninahitra ho an'i Jamaika ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay ao amin'ny EU-LAC Foundation sy ny Pnud amin'ity fivoriana fahatelo ity amin'ny tsingerin'ny hetsika dimy mikatsaka ny hampiroboroboana ny fifampiresahana eo amin'ny roa tonta sy ny mpandray anjara maro ho an'ny fizahantany maharitra. Ao anatin'ny tontolon'ny areti-mifindra COVID-19, ny fifanakalozan-kevitra momba ny faharetana dia tsy maintsy misy fifantohana amin'ny faharetana — ny olona mahatanty, ny vondrom-piarahamonina mahazaka, ny sehatra mahazaka ary ny toekarena maharitra.
Tsy maintsy ampiako fa ny faharetana sy ny faharetana dia foto-drafitr'asa laharam-pahamehan'ny governemantan'i Jamaika. Noho izany antony izany, ny Global Tourism Resilience and Crisis Management Center (GTRCMC) dia natsangana talohan'ny areti-mifindra, ho fankasitrahana ny filana toerana mety handinihana sy hamahana ireo fanakorontanana mety hanohintohina ny lalantsika mankany amin'ny fampandrosoana. Marihiko fa ny Profesora Lloyd Waller, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny GTRCMC, dia isan'ireo mpikatroka amin'izao fotoana izao, ary azoko antoka fa ny famelabelarany dia hizara hevitra bebe kokoa momba ny asan'io vatana io.
Ny fifantohana amin'izao fotoana izao amin'ny faharetana ara-bola sy ny faharetana ho an'ny mpandraharaha, ary tiako ny hanamafisana ny orinasam-pizahantany madinika, madinika ary salantsalany (MSMTEs), dia singa manan-danja ao anatin'ny adihevitra midadasika kokoa amin'ny fanamafisana ny rafitra, ny fizotrantsika ary ny olona ho amin'ny fanarenana sy ny fitomboana. Indrindra indrindra, satria ifotony amin'ny sehatry ny fizahantany ny MSMTE ary, araka ny tiana lazaina fa izy ireo no fototry ny toekarena Jamaikana ahitana orinasa maherin'ny 425,000 ary misolo tena ny 90% amin'ny sehatra tsy miankina.
Tany am-piandohan'ny areti-mifindra, ny Governemanta Jamaikana dia niaiky fa ilaina ny manome sy manohana ity sehatra marefo ity mba hahaveloman'izy ireo ary, amin'ny fanitarana, ny fahaveloman'ny sehatra sy ny toekarena. Tafiditra ao anatin'izany ny fandavana ny saram-panomezana fahazoan-dàlana mitentina 47 tapitrisa dolara manomboka amin'ny Aprily 2020 ka hatramin'ny martsa 2022 ary ny fananganana rafitra fanohanana matanjaka amin'ny fanamboarana sy famerenana amin'ny laoniny ny fiantraikan'ny COVID-19. Ny fanomezana fonosana fiaretana, fampindramam-bola ary fanomezana avy amin'ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola sy ny asam-panjakana dia singa manan-danja kokoa amin'ny fanohanana ny MSMTE. Fanampin'izany, ny Governemantan'i Jamaika amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy tsy miankina dia namolavola ny E-commerce National Delivery Solutions (ENDS), fampiharana mamela ny fitohizan'ny fandraharahana mandritra ny ora tsy fiasana COVID 19.
Teren'ny fameperana ny fidirana amin'ny tsena sy ny famerana ny fahazoana teknolojia vaovao ny MSME. Fanampin'izany, matetika izy ireo no tsy ampy fitaovana mba hamaly amim-pahombiazana ny fanakorontanana noho ny tsy fahampian'ny vola, ny fidirana amin'ny famatsiam-bola sy ny haavony izay misy fiantraikany amin'ny valintenin'ny governemanta amin'ny fanohanan'ny mpandraharaha. Na eo aza ireo fanamby ireo, misy ny fahafahana lehibe ho an'ny mpandraharaha amin'ny resaka e-varotra, ny fampandehanana ny asany ary ny fampivoarana ny drafitry ny fitohizan'ny fandraharahana izay manamafy tsara ny fananganana azy ireo amin'ny fahatairana mahazatra sy mipoitra avy any ivelany.
Ny faharetan'ny fandraharahana sy ara-bola dia mitaky ny fandraharahana ho kinga, manavao, mavitrika ary handray ny fitondran-tena sy hetsika manovaova ho modely maharitra. Hita ao amin'ny olona ihany koa ny fitahirizam-paharetana be dia be — ny mpiasantsika, indrindra ny mpiasa mahay sy salama. Amin'izany, rehefa mampiasa vola amin'ny rafitra sy fotodrafitrasa misy azy ny orinasa dia tsy maintsy mampiasa vola amin'ny vahoakany koa izy ireo.
Amin'ny maha-firenena an-dalam-pandrosoana nosy kely azy, i Jamaika dia mankasitraka ny hasarobidin'ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena amin'ny fampiroboroboana ny tanjona fampandrosoana maharitra. Amin'io lafiny io, ilaina ny fifampiresahana tahaka izao mba ahafahan'ny habaka hifanakalozana hevitra sy hikarohana ny fotoana hitohizan'ny fiaraha-miasa mba hahazoana antoka fa tsy misy tavela, eo amin'ny sehatra eo an-toerana, na eo amin'ny sehatra nasionaly na iraisam-pirenena.
Miandrandra ny vokatr'ireo fivoriana ireo aho, ary miantso ny mpikarakara sy ny mpandray anjara aho mba hihoatra ny antontan-taratasin'ny vokatra mahazatra ho amin'ny tetikasa azo ampiharina sy ny fifampikasohana mahasoa sy mahasoa ho an'ny vahoakantsika.
Misaotra anao noho ny fifantohanao.
Mike Morgan hoy:
November 18, 2021 amin'ny 20: 12
Mila findramam-bola haingana na fohy ve ianao miaraka amin'ny tahan'ny zanabola ambany 3%? Manolotra fampindramam-bola amin'ny orinasa, fampindramam-bola manokana, fampindramam-bola ho an'ny trano, fampindramam-bola ho an'ny fiara, fampindramam-bola ho an'ny mpianatra, fampindramam-bola fanamafisana trosa sns.. na inona na inona naoty.
fampindramam-bola manokana (azo antoka sy tsy azo antoka)
Fampindramam-bola ho an'ny orinasa (azo antoka sy tsy azo antoka)
Consolidation Loan sy ny maro hafa.
Mifandraisa amin'i Etazonia raha mila fanazavana fanampiny momba ny tolotra fampindramam-bola dia hamaha ny olanao izahay
olana ara-bola. mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka: [email voaaro]
Laharana finday: +917428831341 (Antsoy/What's app)
اسل للتمويل hoy:
November 12, 2021 amin'ny 06: 03
essel finances hoy:
November 11, 2021 amin'ny 20: 03
Joanne Patrick hoy:
Oktobra 27, 2021 ao amin'ny 21: 49
مرحبا, أنا سعيد جدا الآن لأنني حصلت اليوم على مبلغ قرضي بقيمة 60.000 دولار من هذه الشركة الجيدة بعد أن حاولت عدة شركات أخرى ولكن دون جدوى هنا رأيت إعلان شركة Joan Finance وقررت تجربته واتبعت جميع التعليمات. وهنا أنا سعيد اليوم ، يمكنك أيضًا الاتصال بهم إذا كنت بحاجة إلى قرض سريع ، فاتصل بهم الآن عبر هدا الله[email voaaro]) ary whatsapp: +919144909366